विधीको शासन र नीतिको कार्यन्वयनमा तपाईको पक्षपातीहरु घर–घरमा छन्। चोक चोकमा राँके जुलुस निकाल्न तयार छन् उनीहरु। तर तपाई स्वयम् यसरी ढल्नु भयो भने त डाक्टर साप समस्या झन पहाड पो बन्ने भो त..।
'सभा सम्मेलनमा अतिथि सत्कार खाकैछन् । ठुला मान्छे भाकै छन् । अँ...लुगा फाटो लाकै छन् । आखिर गर्नु नै के छ र ? यसैको मोह र लोभको लागि उनले संस्था खोलेका हुन् र अध्यक्ष भएका ।'
'राष्ट्रियताको सवालमा एउटा देशको स्वाभिमान अर्काे देशले कसरी थेग्न सक्छ ? घरभित्रको समस्याको समाधान छिमेकमा खोज्नुले कुन अर्थ राख्छ ? ठालु नेताहरुलाई दिल्लीले बोलाउछ कि अतालिँदै हारगुहारको लागि उनीहरु..'
"न्यू योर्कमा कवि तुलसी दिवस"
"गिनिज बुकमा – हामी"
"आमा ! ह्याप्पी मदर्स डे"
“जंगे पिलर गाईबस्तु बाँध्ने किला होइन”
वाह ! नेपाल, क्यावात नेपाली